တရုတ်က '' အရင်းအမြစ်များငြိမ်းချမ်းသောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ '' မှာအန္တာတိကပေမယ့်အရိပ်အမြွက်ငါ့မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-23-2017
တရုတ်ဘေဂျင်းဟာကျယ်ပြန့်တိုက်ကြီးအတွက်တူးဖော်စတင်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဟုတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနှင့်အတူ, တနင်္လာနေ့တွင်ဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝအန္တာတိက၎င်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပပျောက်စေရန်ငှါရှာကြံလေ၏။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုများတိုးချဲ့ဘေဂျင်းအန္တာတိက T ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်အဖြစ် ... တစ်ဦး focal point တစ်ခု ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-10-2017
အာဂျင်တီးနားအာဏာပိုင်များ, စက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများနှင့်သမဂ္ဂများကဏ္ဍအတွက်ခုန်-start ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ယခုအပတ်တိုင်းပြည်အနှံ့ရှိပြီးသားဥပဒေပြဌာန်း unifies တစ်ရှည်လျားသောစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖက်ဒရယ်သတ္တုတူးဖော်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်။ အဆိုပါအမျိုး, သတ္တုတူးဖော်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်အကြိုက်ဆုံးတခါ, ဟက်တာ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
ဒါဟာ liftoff ပဲ! တရုတ်-built လေယာဉ်များကောင်းကင်ယံပျံကြာ
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-05-2017
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောတရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းဖြစ်ခရီးသည်တင်လေယာဉ် C919 သောကြာနေ့တွင်ရှန်ဟိုင်း Pudong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့င်း၏သမီးကညာကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်ချွတ်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။ လူ 3000 ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, Single-တန်းမှာလေယာဉ်ပျံရဲ့ပွဲဦးထွက်၏သမိုင်းဝင်အခိုက်မျက်မြင်။ အဆိုပါ C919 စီမံကိန်းကို ... 2006 နှစ်ဦးအသင်တို့သည်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ဆက်ဖတ်ရန် »
SA သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ရပ်ပြန်လည်သုံးသပ်လယ်သမားများ, မိုင်းလုပ်သားနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများထံမှ 131 တင်ပြချက်များကိုဆွဲဆောင်
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-02-2017
မြေပိုင်ရှင်နှင့်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများသည်တောင်ပိုင်းသြစတြေးလျရဲ့သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ရပ်၏လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်ကျော်သူတို့အမှုကိုငြင်းခုံတင်ပြအိပ် 131 အုပ်စုများအကြားရှိပါတယ်။ သတ္တုအရင်းအမြစ်များနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးတွမ် Koutsantonis များအတွက်တစ်ဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့လူသိရှင်ကြားပေမယ့် ... မည်ဖြစ်ကြောင်း "တင်သွင်းမှုများ, ပေါင်းစုများမှာတစ်ချိန်က" ဟုပြောသည် ဆက်ဖတ်ရန် »
သတ္တုတွင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်း: လွန်း, သိပ်နောက်ကျ
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-27-2017
လက်ရှိသတ္တုတူးဖော်ရေးဥပဒေပြဌာန်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြင်ဆင်ချက် ပို. ပို. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အမှားအယွင်းများနှင့်အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုပြီးခဲ့သည့်မိနစ်ဖြည့်စွက်အတွက်ချ bogged ဖြစ်လာရသည်။ ယင်းသတ္တု & ရေနံအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအက်ဥပဒေ (MPRDA) ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်း ... ကလွန်ရင်တောင် ဆက်ဖတ်ရန် »
ခေတ်မီသတ္တုတွင်းနှင့်နည်းပညာအပတ် Sudbury အတွက်ချွတ်စတင်ကျင်းပ
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-26-2017
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင်နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ပင်လယ်ပြောင်းလဲမှုလျှက်တဲ့အခါအဲဒီအချိန်တုန်းကသူကလူငယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ကဏ္ဍအတွက်ရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုသူတို့ကိုပညာပေးဖို့ပိုပြီးအရေးပါသောကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှရဲ့။ ဒါက Mode ကိုပယ်ကန်ဖို့နှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့လယ်စာစားပွဲစဉ်အတွင်းဧပြီလ 21 ရက်နေ့တွင် shared မက်ဆေ့ခ်ျဖြစ်ခဲ့သည် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
အီတလီရဲအရာရှိများ Great Wall ပေါ်မှာစည်းချက်လမ်းလျှောက်
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-25-2017
ရှစ်တရုတ်ရဲအရာရှိကသူတို့အီတလီ counterparts တွေကိုတရုတ်ခရီးသွားဧည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်ဇွန်လအစောပိုင်းများတွင်အီတလီမှာကင်းလှည့်သွားပါလိမ့်မယ်, အကြီးတန်းရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးကတနင်္လာနေ့ကပြောသည်။ အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်တတ်ကျွမ်းရွေးချယ်ထားသောအရာရှိများ, ... ရန်ရောမမြို့, မီလန်, Florence နဲ့နေပယ်အတွက်သာယာလှပအစက်အပြောက်ကင်းလှည့်ပါလိမ့်မယ် ဆက်ဖတ်ရန် »
Gunnedah လူကို NSW သတ္တုတွင်းလူငယ်အောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိ
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-20-2017
Gunnedah ရဲ့ Murray O'Keefe ယင်း NSW သတ္တုတွင်းလူငယ်အောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်ခံယူဖို့ရှေးခယျြခံရပြီးနောက် "chuffed" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Gunnedah Shire ကောင်စီဝင်နှင့် Whitehaven ကျောက်မီးသွေးအလုပ်သမားယခုလအစောပိုင်းက NSW သတ္တုတွင်းစက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာအနိုင်ရသူအဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်ပေးသွင်း '' NSW ပါလီမန်အောက်လွှတ်တော်မှာဆုပေးပွဲခဲ့သည်။ နှစ်ခုတစ်ခုမှာ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
သြစတြေးလျ Yancoal မှကျောက်မီးသွေးမိုင်းများ၏ရီယို Tinto ရဲ့ $ 2.45bn ရောင်းချ greenlights
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-14-2017
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Yanzhou ကျောက်မီးသွေးသတ္တုတွင်း, ရီယို Tinto ရဲ့ (ASX, Lon: ရီယို) ၏က၎င်း၏စီစဉ်ထား $ 2,45 ဘီလျံအထိဝယ်ယူနှင့်အတူရှေ့ဆက်သွားကြဖို့အစိမ်းရောင်အလင်း၏လက်အောက်ခံမုဆိုးချိုင့်၌အပူကျောက်မီးသွေးပိုင်ဆိုင်မှု: သြစတြေးလျအာဏာပိုင်များ (yal ASX) Yancoal ပေးပြီ။ အဆိုပါနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့, သဘောတူညီချက်အတည်ပြု ... ဆက်ဖတ်ရန် »
Fiore ရှာဖွေရေး CEO ဖြစ်သူ Tim Warman, Yámanaရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အယ်လ်Peñónသတ္တုတွင်းကဲ့သို့တူညီသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မြေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ချီလီအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ Pampas အယ်လ်Peñónကိုရွှေစီမံကိန်းမှာတူးဖော်ကမ်ပိန်း၏အစကြေညာခဲ့သည်။ Warman ဟာ 2017 Prosp မှာပြီးခဲ့သည့်လက MINING.com အားမိန့် ... ဆက်ဖတ်ရန် »